အာမခံကိုမလိုပဲအပိုအတိုးမပေးဘဲချေးငွေကိုအဆင်ပြေစွာအသုံးပြုချင်ပါသလား။ သင်ချေးငွေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုသင်တတ်နိုင်သမျှကျေနပ်မှုရှိစေရန်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်။ လူတစ်ယောက်စီမှာ ...
အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းငွေပေးငွေယူသည်ပလတ်စတစ်ကတ်များအရလူကို ကျေးဇူးပြု၍ ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ ction, ဒါမှမဟုတ်လက်ခံထားတဲ့အစွဲ? ktsiya (လတ်။ transactio သဘောတူညီချက်, စာချုပ်ကနေအင်္ဂလိပ်ဘဏ်ငွေပေးငွေယူ, ယေဘုယျအားဖြင့်, မည်သည့်စစ်ဆင်ရေး ...
Sberbank မဟုတ်ပါ၊ သင်ဤငွေကိုမယူမချင်းတစ်စုံတစ်ခုကိုပြန်ပို့ရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်ကဒ်ကိုပုံမှန်ငွေထုတ် (အသုံးစရိတ်စုဆောင်းထားသော) ကဒ်အဖြစ်သုံးနိုင်သည်။ သင်၏ရန်ပုံငွေများကိုထိုနေရာတွင် ထား၍ ၎င်းအတွင်း၌သုံးစွဲပါ။
Sberbank တွင်၎င်းတို့သည်စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်တောင်းဆိုနေပါသည်။ လစာအတွက်၊ ဘဏ်တစ်ခုမှချေးငွေရယူရန်ရိုးရှင်းသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ဘဏ်သည်မြင်တွေ့နေရသောကြောင့်လက်မှတ်များမလိုအပ်ပါ။
ဘဏ်အနေဖြင့်ဘဏ်နေ့တွင်မည်မျှကြာမြင့်သည်အထိဘဏ်နေ့၌လာမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ဥပဒေအရ "ဘဏ်လုပ်ငန်းနေ့" ဟူသောဝေါဟာရကိုမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့် ဆို၍ မရပါ၊ သို့သော်လက်တွေ့တွင် "ဘဏ်လုပ်ငန်းနေ့" ဟူသောအယူအဆကိုနားလည်ထားပါသည်။
ရုရှား Standard Bank သည်မည်သည့်ဘဏ်များနှင့်ပူးပေါင်းပါသနည်းရုရှား Standard Bank သည် MDM Bank နှင့် Master Bank နှစ်ခုတို့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည်။ ဘဏ္cardsာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ရုရှားဘဏ်ကတ်ကိုင်ဆောင်သူများအကြားချုပ်ဆိုထားသောသဘောတူညီချက်ကို အခြေခံ၍ ...
မင်းအတွက်ချေးငွေကိုဆပ်ဖို့ကုမ္ပဏီတွေကဘာတွေကမ်းလှမ်းနေကြတာလဲ။ အခမဲ့ဒိန်ခဲဘယ်မှာလဲ။ ..Right! http://rbcdaily.ru/finance/562949989025932 ဈေးကွက်တွင်ဘဏ္pyာရေးပိရမစ်အသစ်ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ယခင်ကလိမ်လည်သူများသည်နိုင်ငံသားများ၏စုဆောင်းငွေများရရန်ကြိုးစားခဲ့သည်၊
Sberbank အထိမ်းအမှတ်ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ Denyuzhka ၏စက်ဝိုင်းရှိပိရမစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည်ဖြတ်ထုတ်ခံရသောဒဏ်ချက်များဖြင့်အစိမ်းရောင်ပတ် ၀ န်းကျင် !!!! ထူးဆန်းပါတယ်၊ ငါတတိယအကြိမ်အဖြေပေးဖို့ကြိုးစားနေပေမယ့်သူကစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်မရှိပါဘူး။ ငါနောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်ကြိုးစားမယ် ထိပ်ဆုံး ...
အကြွေးဝယ်ကဒ်။ အကြွေးဝယ်ကဒ်အကောင်းအဆိုးကဘာလဲ။ သူ၌တစုံတယောက်သောသူသည်သူ၌အဘယ်သို့ရှိသနည်း။ ကွဲပြားခြားနားသောဘဏ်များနှိုင်းယှဉ်ခက်ခဲသည်။ ဤတွင်အကြွေးကဒ်များကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း၏ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုအချက်များဖြစ်သည်။ ၁။ ဦး စားပေးရမည့်ရက်အရေအတွက် ...
VTB 24 လစာကဒ်တွင်ရှိသည့်လက်ကျန်ငွေနှင့်ကိုယ်ပိုင်ရန်ပုံငွေများကဘာကိုဆိုလိုသနည်း ???? ရရှိနိုင်သောလက်ကျန်ငွေပမာဏသည် ... overdraft သည်ဘဏ်မှအမြဲတမ်းသင့်အားပေးသောချေးငွေဖြစ်သည်။ ဆိုပါစို့ ...
Sberbank မှ ATM တွင် VTB 24 ကဒ်မှငွေကိုထုတ်ယူပါက၎င်းတို့သည်ကော်မရှင်တစ်ခုယူရပါမည်လား။ သို့ဆိုလျှင်မည်မျှနည်း။ VTB တွင်ကော်မရှင်မည်မျှကျသင့်မည်ကိုစာတိုက်ဘဏ်၏ငွေလက်ကျန်စစ်ဆေးပါ။
ဒီချေးငွေအာမခံသူနဲ့သူ့တာဝန်တွေကဘယ်သူလဲ။ အာမခံချက်ကဘယ်သူလဲ။ ချေးငွေအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္isကဘာလဲ ပြီးတော့ဘဏ်တွေကဘာလို့စားသုံးသူချေးငွေနဲ့အခြားချေးငွေတွေကိုထုတ်ပေးချင်ရတာလဲ။
VTB 24 လစာကဒ်အတွက်စကားဝှက်ကိုမေ့သွားတယ်။ ကဒ်ပြန်လည်ထုတ်ပေးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဘဏ်သို့သင်ဆက်သွယ်ဖို့လိုသည်။ PIN နံပါတ်ကိုဘဏ်ကမသိဘူး။ သင့်အနေဖြင့်ဘဏ်အနေဖြင့်ကော်မရှင်အားငွေကောက်ခံရန်အချက်ကိုသင်၏အာရုံ ...
Chip ဘဏ်ကတ်တွေကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။ Chip ကဒ်များသည်တူညီသောနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်သည်။ သို့သော်သတင်းအချက်အလက်ပါသောသံလိုက်တိပ်အစားအထူးချစ်ပ်ကိုကဒ်များတွင်ထည့်သွင်းသည်။ ထိုကဲ့သို့သောချစ်ပ်သည်ကွန်ပျူတာအသေးစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကဒ်ပြားများ
Sberbank Visa အီလက်ထရွန်သည်ကဒ်ပေါ်တွင်ထိန်းချုပ်မှုအချက်အလက်များဘယ်မှာရှိသနည်း။ ထိန်းချုပ်မှုအချက်အလက်များသည်ကဒ်လျှောက်လွှာတွင်ရှိပြီး၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ထိန်းချုပ်မှုသတင်းအချက်အလက်လည်းရှိသည် - ၎င်းကိုထိန်းချုပ်မှုသတင်းအချက်အလက်မှရယူရမည်။
သက်တမ်းကုန်ဆုံးသော Sberbank ကဒ်အကြောင်းသင်၏ကဒ်ကိုသင်ဖွင့်လှစ်ထားသည့်ဌာနခွဲကိုဆက်သွယ်ပါ။ ၎င်းသည်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပါကသင်၏ဘဏ်တွင်ကဒ်အသစ်တစ်ခုရှိပြီးသင့်ကိုစောင့်နေစဉ် (သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်တွင်ကဒ်များ ...
ရူဘယ်အတွက်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဘယ်လောက်လဲ ??? ငါတရာဒေါ်လာစျေးတရာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်! ၂,၇၀၀ ဖြစ်ကောင်းနည်းနည်းများပြီးရင်သင့်ရဲ့အနီးဆုံးဖလှယ်သူ! ရူဘယ် ၃၀၀၀ လောက်၊ ဒါ ၃ ခုလောက်စဉ်းစားမိတယ်။
ကဒ်နံပါတ်ကိုသာ သိ၍ ကတ်ထဲမှငွေထုတ်ယူလို့ရပါသလား။ ဟုတ်ပါတယ်၊ နိုင်ငံခြားမှကဒ်နံပါတ်ဖြင့်ငွေလွှဲခြင်းနည်းလမ်းမရှိပါ။ မည်သူမျှငွေထုတ်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ များသောအားဖြင့်စကားဝှက်တစ်ခုလိုအပ်သည်။
မော်စကိုဘဏ်မှ Sberbank2LENA သို့အဖွဲ့အစည်း၏ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်း (Sberlokhs ၏ ၀ န်ထမ်းများကဲ့သို့သောအရာသည် Sberlokh ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်းမရှိသင့်ပါ။ အားလုံးသည်တူညီသော (greatcoat) စားပွဲမှထွက်လာကြခြင်း။ လွှဲပြောင်းသည်
ကျွန်ုပ်ဖုန်းကိုတပ်ဆင်ပါ။ ချေးယူရန်သင်တစ်နေရာမဟုတ်တစ်နေရာတွင်တရားဝင်အလုပ်လုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီးအတွေ့အကြုံအချို့ရှိရမည် (ဘဏ်တစ်ခုစီတွင်အတွေ့အကြုံအတွက်ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များရှိသည်) တရားဝင်ဘယ်နေရာမှာ ...
68 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 1,163 စက္ကန့်ကျော် Generate ။